MADAX GEEL NINKII QAADAYBA DHIG. Qalinkii Maxamed Gacayte.
Monday January 10, 2022 - 02:20:44 in Maqaallo by Super Admin
Go’aanka lawada sugayo ee Maxkamadda Dastuuriga ah wuxuu soo afjari doonaa muranka sharci ee ka dhashay Xeer Lr.14 ma dhaqangalba mise maaha...!!! Go,aan lagu wadaqanco alle haynooga dhigo.
Doorasho kasta waa in waqtigeeda lagu qabto, iyadoo la raacayo sharciga iyo Dastuurka dalka JSL. Furista Ururada waa xaq dastuuriya oo cidna aanay diidi karin, sida doorashada Madaxtooyada. Maaha inaad dantaada ku jaangoyso oo labada doorasho mid u ruclayso mid kalena ay kugu adkaato soo hadal qaadkeedu.
Inaad qaranka Hogaaminkiisa qabatid ku iman mayso xoog & xajiimayn haykalka dawladnimada wax u dhimaysa. Waa inaad la timaado siyaasad bisayl hogaamineed wadata oo aad ku hantido rabitaanka shacabka somaliland. Tuduc ku jiray Maansadii Gurmad bal ku yar naso.
"Waxaad noo gashee horiyo
Gadaal waxaad maagan tahay
Adoon galin ceeb nin kale
Waxay dadku kaa guntaan" Gaariye
Axsaabta Qaranka waxa laga doonaya inay umadda ka iibiyaan barnaamij hufan oo ka duwan mid ka kale. Shacabku way ka Koreen durbaanada qabyaalada ee ku dhisan waa "Markayagii" iyo Balaayo ayaa dhici doonta hadii sida aan doonayo la yeeli waayo. Tuduc kale waatuu Abwaan Gaariye lahaa.
"Gagaa lagu dheelayaa
Shacbigu garsoor ka yahay
Waxaa guul sheegan kara
Ninkay ugartaan iyagu" ~ Gurmad, Abw. Gaariye
Waa sunaha nidaamka dimuqraadiyada, mar kasta oo uu yimaado tartan doorasho aragtida siyaasadeed ee bulshadu waxay la kala jirtaa axsaabta tartanku dhexyaalo oo mid kastaa isu arko inuu yahay kan qaranka gaadhsiin kara horumarka uu hiigsanayo. Axsaabta qaranka waxa laga rabaa tartan hufan oo cunfi iyo caadifad midna lahayn inay la horyimaadaan bulshada ay codka ka doonayaan bari ka maalin, idinkoo maanka ku haya danta guud ama inta laysku hayaa ay ka wayn tahay inta laga midaysan yahay. Tuduc kale waatuu macalin Gaariye lahaa:-
"Galool mudhay oo farcamay
Nudaha goonyaha u fiday
Haday kala gaar yihiin
Guntay ka midaysan yihiin"
Alle sida xaqa ah hayna waafajiyo, abaartana haynaga soo jabiyo Aamiin.
Qalinkii: Maxamed Gacayte.